Na-amalite mgbe niile site na Gnome-Shell na Ubuntu 11.10 | Site na Linux
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nke Ubuntu 11.10 ma ị wụnye Gnome-Shell, ị nwere ike chọọ ịmalite oge gị site na iji nke a ma ọ bụghị Ịdị n'Otu.
Iji mezuo nke a, anyị ga-emeghe ọnụ ma tinye:
na iji ozo Ịdị n'Otu:
N’ụzọ dị otu a, anyị enweghị iji aka anyị họrọ nke anyị chọrọ iji oge ọ bụla anyị bidoro nnọkọ ahụ.
Hụrụ na: Ndụ Ndụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Na-amalite mgbe niile site na Gnome-Shell na Ubuntu 11.10
Unitydị n'otu adịghị eme ka m kwenye ma ọlị, ọ bụ na compiz dị ezigbo ejighị n'aka, mmebi iwu ọ bụla na ihe ọ bụla na-aghọ ọgba aghara, canonical kwesịrị ịme ụdị nsụgharị Lite nke na-agụnye naanị nhazi Unity na njikwa nke ya na-eme ka ọ kwụsie ike. , ọ bụ ezie na cube na mmetụta ndị ọzọ na-efu, na-ahapụ nanị mmetụta siri ike nke ịdị n'otu. Enwere m olile anya na mgbanwe na Wayland ndị ọkwọ ụgbọ ala ga-eme ka ogo ha ka mma.
Ndewo na mbụ, na-anabata anyị na saịtị 😀
Ejighị n'aka Compiz? N'ezie ee, ma ọ bụghị na distros niile. Echere m, ejiri m Compiz oge ​​gara aga na ArchLinux m (anaghị m eji ya ọzọ) na eziokwu dị 100% kwụsie ike, na Debian M nwekwara ike ịgwa gị na ọ kwụsiri ike.
Gnome3 + Shell na-enye ohere ihe ị na-ekwu, ya bụ, ọ nwere ngwa nke aka ya nke na-elekọta mmetụta na mmegharị ahụ (ya bụ, ọ bụghị compiz).
Ọ dị mma, ịnabata blọọgụ anyị.
Ka anyi nwee olile anya .. U_U
hello, abum onye ohuru na Linux ma m nwere nsogbu na nke m .. nke ọma ụdị a bụ 11.10 nsogbu bụ na m rụnyere sheome genome ma ... ugbu a ka m banye na ịdị n'otu ọ naghịzị egosị m ihe ọ bụla naanị desktọọpụ ndabere na ọ naghị egosi mmanya ma ọ nweghị pịa ọrụ ...
ọ na - arụ ọrụ naanị na gnome shell .... M ga - enwe ekele maka ya ma ọ bụrụ na ị ga - enyere m aka ..